Deadbeats paRatidziro? Twipu Martech Zone
Deadbeats paRatidziro? Twitter - Nyowani AP Yekushandisa Chishandiso
Chipiri, August 11, 2009 Svondo, Kubvumbi 24, 2016 Lorraine Bhora
Ini ndaive ndakasuruvara zuro nekuti ndanga ndichimhanyisa maievoice ekupedzisira kubva kune vatatu vatengi. Ini ndaive ndakagumbuka, uye ndaida kubuda, saka ini ndakaisa un isina mhosva kutaura (zvakanaka kwete kudaro asina mhosva) pa Twitter. Ndakabvunza:
Kana mutengi asingabhadhare bhiri uye anonzvenga mafoni ako, yakaipa fomu kuataura nemazita paTwitter?
Mhinduro dzandakawana dzakabva kushamwari dzichindiudza kuti yaive pfungwa yakaipa kwazvo, kune vashoma vakafunga kuti inogona kushanda, kune vamwe vakazvipa kufunga zvine hungwaru uye mazano mashoma ekunakidzwa mumusanganiswa.
@wolfems uyo akati, "ndinoida… Zviite nemusi weSvondo uye inogona kunge iri nyowani nyowani, SundayShame. Iyo fomu nyowani yeAP manejimendi.
Ndichiri kusahadzika ndichave ndichiendesa DEADBEAT zviziviso chero nguva munguva pfupi, zvakasimudza mimwe mibvunzo inonakidza. Sezvo internet inoita kuti bhizinesi riwedzere kujekesa, zvichaita kuti zvese zviitiko zvive pachena? Uye ndiko kukanganisa here kana kusimudzira muhukama hwebhizinesi?
Ini handina mhinduro, asi ndingade mhinduro. Iwe unonzwa sei nekugadzira rumwe ruzivo kuruzhinji, uye urikushandisa sei Social Media nhasi kuita izvozvi?
Tags: kuurayakunyadzisa kwevanhukunyadzisakushambadzira kwevanhupasocial media kunyadzisaTwittertwitter kunyadzisa
Mutongi Zita Mazano Kubva Pamaonero evateereri
Aug 11, 2009 na6: 10 PM
Kana iwe ukatarisa kuunganidza mhando maforamu, ivo vanotumira zviitiko mukubata kwavo kune mumwe nemumwe, ayo ari akabhadharwa mashandisiro. Zvino, izvo hazvisi zvimwe zvakafanana mune vamwe nyanzvi maziso seyechokwadi 'bhizinesi' kutengeserana, asi rimwe bhizinesi rakaitika. Ndokusaka ivo vanhu vamwe chetevo vachitora nguva yekuita zvinyorwa zve 'vatengesi vakanaka' uye vopa kurudziro.
Ini ndinotarisa mutemo wegoridhe, ita kune vamwe… .ndingadi here kuti mumwe munhu anyore chimwe chinhu chakashata zvechokwadi nezita rangu? Kwete. Ndingaite tsika dzakasimba dzebhizimusi - Hongu. Izvo zvaizodzivirira izvi zvachose.
Ini handingambokurudzira kutaura mumwe munhu / kambani nemazita, nekuti pakupedzisira inoratidzira kumashure pahunhu hwako. Asi kana vaine imwe mhando yepamhepo Persona iro risiri iro zita ravo chairo, saka ini ndinofunga kana zvaitwa zvinonaka zvinogona kukodzera kana chinangwa chiri chekuyambira vamwe.
Aug 11, 2009 na6: 15 PM
Ndiri wese weyambiro yakasimba kutanga, Lorraine. Ini handina dambudziko rekubuda kuurayiwa - sekureba sekuziva kwavo mhedzisiro. Kuteedzana kwangu kungave email> izwi> mumunhu (kana zvichibvira)> gweta… uyezve kana kuchine kusapindurwa = kuruzhinji.
Ndiri pakati pekutanga izvozvi uye isu tine akati wandei mainvoice akasarudzika; zvisinei, takanga tine zvibvumirano nevatengesi izvo zvataigona kubhadhara chete kana tagamuchira mari yekudyara. Ndinovimba handione zita rangu pa Deadbeat Svondo chero nguva munguva pfupi!
Aug 11, 2009 na2: 54 PM
Chaizvoizvo kutyora chibvumirano chemagariro. Vanhu vanotarisira kuti ruzivo rwekuyerera kwemari kuti ruchengetwe zvakavanzika, kunyanya zvine chekuita nenguva uye kuti mabhiri anobhadharwa sei.
Nekudaro, iwe unogona kumisikidza kumberi nemutengi kuti iwe unozoburitsa maakaundi avo ese anobhadharwa data, rakanaka uye rakaipa. Izvi zvakafanana negakava remihoro rakavanzika - chero munhu anogona kutevera nharo, asi kugadzira switch kwakanyanya kwazvo kuti vanhu vazhinji vafungisise.
Aug 13, 2009 pa 3: 08 AM
Isu tinonyatsoshanda nevatengi, uye tinotakura ma invoice kwemwedzi yakati wandei. Akareba kupfuura vese aive mutengi akabhadhara $ 200 / mwedzi kwemwedzi gumi nemasere. Ndiri zvakanaka nazvo chero bedzi vachitaura neni.
Ini pamwe handingambodi kuita izvi, asi kuzvinyora kwakaita kuti ndinzwe zvirinani! Ndatenda nemhinduro.
Aug 14, 2009 na3: 07 PM
Ini handifunge kuti kutumira runyorwa rwevatengi vanouraya kuchaita chero chinhu - kunze kwekunge mutengi atsamwa zvakakwana kutora matanho epamutemo. Chii chimwezve, haisi… ..nice. Kune rimwe divi, tsamba yakanyorwa zvine mutsindo kubva kugweta rako inogona kushanda.
Ndakagara ndichifunga kuti zvingave zvinobatsira kuve ne "yakashata / yakanaka" runyorwa pakati pevashandi veindasitiri kuti tikwanise kudzivirira kuita basa revatengi vasingazotibata zvakanaka.
Aug 14, 2009 na3: 08 PM
Kuve muridzi webhizimusi diki ane shoma mari kuyerera, sekuwanda kwandingade, ndicha parotera zvakataurwa naJay. Ndingafare here kuona zita rangu rakatumirwa paTime nekuda kwechikonzero ichi? Kwete, asi, ndine here matambudziko ku tweeting nezve inosiririsa (kana yakasarudzika) zviitiko zvebasa revatengi? Kana bodo!
Aug 14, 2009 na3: 09 PM
Zvichengete zvakavanzika! Rimwe zuva zvinhu zvinogona kutendeuka uye iwe haudi kupisa mabhiriji. Ini ndinotenda iwo mikana ndeyekuti kana iwe uri kuvhima kubhadhara saka vamwe vazhinji. Ndakaona kuti vanhu vazhinji vanoda kuita zvakanaka uye kubhadhara bhiri. Nehurombo, kana mubhadharo uchinonoka padivi rekutambira unononoka padivi rinobhadharwa uye ndozvinoita kuketani. Hupfumi uhwu hunoda ruzivo rwakanyanya nekushushikana kunozozvipa mukubatsira kusimudzirana mubhizinesi kudzamara taona kutendeuka kukuru nekudzoka kwehupfumi uhu.
Aug 14, 2009 na4: 27 PM
Ini pachangu ndinonzwa kuti kutumira nezvevatengi hakuna hunhu.
vanogona kuve nechikonzero chakaringana mune ino hupfumi yekunonoka kubhadharwa eg kurapwa, kumhan'ara kurasikirwa nebasa ETC. uye vanonyara uye vasina chokwadi chekutora nekuda kwemamiriro ezvinhu
zvakare mumwe anofanirwa kungwarira zvauri kutumira nezve vanhu mukutsamwa.
Ini ndakadzingwa makore manomwe apfuura kubva kukambani hombe pano uye ndangoona kuti maneja wangu wekare kubva kukambani iyoyo ane account yeTwitter uye ari kutumira zvakashata-zvakazadza nhema manyepo nezve INI uye handina chokwadi nei?
Aug 15, 2009 na7: 35 PM
Mumamiriro ezvidhina nematope, hazvina kufanana nekutumira cheki cheumwe munhu yakaipa pamusoro perejista? Kune rimwe divi, zvinoenderana nevateereri, zvinogona kushandira kuita kuti poster iite seyakashata sekufa, uye iwe haudi izvo.
Ini ndaisiya runyararo rweveruzhinji kunze kwaro. Kune nguva dzose Iyo Ripoff Chirevo.
Aug 16, 2009 pa 12: 17 AM
Kunze kwevanhu vane chikwereti kwauri mari vanoita zvinhu zvitatu:
1. Zvinotaridza kuti haugone kuvimbwa kuti ubate mamiriro akaoma nehungwaru.
2. Kana mutengi wako ari kusangana nematambudziko, yako post inogona kuuraya kuyedza kwavo kutora mari kana kuwana dhiri rinokubhadhara iwe.
3. Nekuburitsa mutengi wako, urikutumira chiratidzo kune vatengi venguva yemberi kuti uchavaitira zvakafanana.
Iwe unofanirwa chete kunze kwevanhu kana iwe wafunga kuvaendesa kudare. Hukama hunopfurwa ipapo.
Aug 16, 2009 na3: 14 PM
Semazuva ese nguva yangu yandaishandisa kuverenga tsamba yaDoug yakaratidza kudyara kwakanaka kwenguva yangu. Isu tese tinogona kufananidzwa nepfungwa yake, anga asati ave pamativi ese echiitiko uye hazvigadzikane kuve mune chero chinzvimbo.
Hapana chakaipa chakaitwa mukubuda kwako uye ini ndakakuwana waburitsa imwe mhinduro, zvese zvakakosha, kupfuura zvaungatarisira.
Kwandiri, VaKarr, uyu mumwezve muenzaniso wesimba rechokwadi uye kukosha mukati meSmall Indiana… hatifanire kuzeza kana kurerutsa mashandiro anoita pfungwa dzedu dzazvino mukubuditsa maonero kubva kune vanozivana navo uye vavanoshanda navo.
Mumwe nemumwe anopindura pano akawedzera zvinobatsira uye mukuita kudaro zvakare akandibvumidza kuwedzera nyika yangu neruzivo vachindipfumisa nenzira yakakura nekuenderera mberi kuratidza hunhu hwavo nehungwaru uye nekupa zvakare muenzaniso wekuti kukosha kweiyo diki diki Indiana inogona kuve tese.